यर्मिया 25 ERV-NE - यर्मियाको - Bible Gateway
25 यो सन्देश जुन यर्मियाकहाँ आयो त्यो यहूदाका सबै मानिसहरूको विषयमा सम्बन्धित छ। यो योशियाहको पुत्र यहोयाकीम यहूदाको राज-सिंहासनमा बसेको चौथो बर्षमा भएको हो। यो नबूकदनेस्सरले बाबेलको राजमुकुट पहिरिएको प्रथम बर्षमा भएको हो।2यसैले त्यही अगमवक्ता यर्मियाले यहूदाका जम्मै मानिसहरू र यरूशलेमका बासिन्दाहरूलाई भनेः
3 यहूदाका राजा आमोनका पुत्र योशियाहको राज्यकालको तेह्रौं बर्षदेखि आजको दिनसम्म अर्थात् तेइस बर्षसम्म परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो र मैले घरिघरि तिमीहरूलाई भनिरहेकोछु। तर तिमीहरूले यसलाई ध्यान नै दिएनौ।4परमप्रभुले घरिघरि आफ्ना दास अगमवक्ता तिमीहरूकहाँ पठाउनु भएकोछ। तिमीहरूले तिनीहरूको कुरा सुनेनौ अथवा तिनीहरूलाई कुनै ध्यानै दिएनौ।
5 ती अगमवक्ताहरूले भने, “तिमीहरूले आफ्ना जीवन शैली परिर्वतन गर। कुकर्महरू गर्नदेखि आफूलाई पर राख। जीवन परिवर्तन गर र यस देशमा जुन परमप्रभुले तिमी र तिमीहरूका पिता-पुर्खाहरूलाई सदा-सर्वदाका निम्ति दिनु भएकोछ त्यहाँ बसो बासो गर।6अन्य देवताहरूको पछि नलाग। तिनीहरूका सेवा वा पूजा नगर। मानिस निर्मित मूर्तिहरू पूजा नगर। यसले मलाई रीस उठाउनेछ। यदि तिमीहरूले मानेनौ भने तब म तिमीहरूलाई नोक्सान गर्नेछु।”
7 परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, “तर तिमीहरूले मेरो कुरा मानेनौ। तिमीहरूका मूर्तिहरूले मलाई उत्तेजित पार्यौं अनि आफैंमा नोक्सान ल्यायौ।”
8 यसकारण सेनाहरूका परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ, “तिमीहरूले मेरो सन्देशहरूमा ध्यानै नदिएका हुनाले,9म उत्तरका सबै कुलहरूका मानसिहरूलाई र मेरो दास बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरलाई ल्याउनेछु, र तिनीहरूलाई यो देश र यसका बासिन्दा र यसका चारैतिरका सबै जातिहरूको विरूद्धमा ल्याउनेछु। म ती सारा देशहरूलाई बिलकुलै ध्वंस गर्नेछु। म ती भूमिहरू सदालाई सूख्खा मरुभूमि जस्तो बनाई दिने छु अनि तिनीहरूलाई डरलाग्दो गाली र एक स्थायी अपमानको पात्रमा परिणत गर्नेछु। 10 म ती ठाउँहरू हर्ष र उत्साहका खुशीहरूलाई शेष पारिदिनेछु। त्यहाँ अब-उप्रान्त नव दुल्हा-दुल्हीका खुशी र आनन्दका दिनहरू हुने छैन। म मानिसहरूले पिस्ने जाँतोका आवाज सम्म उठाउँनेछु। म बत्तीको उज्यालोलाई लगिदिनेछु। 11 त्यो सम्पूर्ण क्षेत्र नै मरुभूमि जस्तो उजाड हुनेछ। यी सबै जातिहरूका मानिसहरूले सत्तरी बर्ष सम्म बाबेलका राजाको सेवा गर्नेछन्।
12 “तर सत्तरी बर्ष बिती सके पछि म बाबेलका राजालाई दण्ड दिनेछु। म बाबेलका जातिहरूलाई पनि दण्ड दिने छु।” यो परमेश्वरको सन्देश हो “म बाबेलवासीहरूको भूमिलाई पनि उनीहरूको पापहरूको कारण दण्ड दिनेछु। म त्यो भूमि सदाको लागि बाँझो बनाई दिनेछु। 13 मैले त्यस देशको विषयमा जे भनेकोछु र यर्मियाले विरोधमा यसको जे अगमवाणी गरेकोछ अनि पुस्तकमा जे लेखिएकोछ म त्यो देशकोको विरूद्ध सबै ल्याउनेछु। 14 बाबेलका मानिसहरूले धेरै राज्यहरू र महाराजहरूको सेवा गर्नु पर्नेछ। तिनीहरूले गरेको अनिष्ट कामका निम्ति तिनीहरूलाई सजाय दिइनेछ।”
संसारका राज्यहरू माथि न्याय
15 परमप्रभु, इस्राएलका परमेश्वरले मलाई यी कुराहरू भन्नुभयो “यर्मिया, यो कचौरोको दाखरस मेरो हातबाट लेऊ। यो मेरो क्रोधको दाखरस हो। म तिमीलाई विभिन्न जातिहरूमा पठाई रहेछु। ती जातिहरूलाई यही प्यालाबाट पियाऊ। 16 तिनीहरूले यो पिउँनेछन्। त्यसपछि तिनीहरू धरमराउनेछन् र पागल मानिस जस्तो व्यवहार गर्नेछन। तिनीहरूले तरवारको कारण त्यसो गर्छन् जुन तिनीहरूको विरूद्ध म पठाउँदैछु।”
17 यसर्थ मैले परमेश्वरको हातबाट त्यो कचौरा दाखरस लिएँ। म ती जातिहरूमा गएँ अनि त्यो कचौराबाट मैले दाखरस पियाँए। 18 मैले यो दाखरस यरूशलेम र यहूदाका शहरहरूमा खनाइदिएँ। मैले यहूदाका राजाहरू र अगुवाहरूलाई त्यो कचौराबाट दाखरस पिउँन लगाँए। तिनीहरू आज जस्तो देखन्छन, मरुभूमि झैं उजाड, डरलाग्दो चीज अनि खिल्ली र श्रापको पात्र बनाउन मैले तिनीहरूलाई पिलाएँ।
19 मैले मिश्रका राजा फिरऊन, तिनका अधिकारीहरू, महत्वपूर्ण नायकहरू, उनका सबै मानिसलाई परमप्रभुको रीसको दाखरस पिउनु लगाँए।
20 मैले अरबका जम्मै बासिन्दाहरू, ऊजका सबै राजाहरू, पलिश्तीहरूका सबै राजाहरू जसमा अश्कलोन, गाजा, एक्रोन, अश्दोदमा बाँकी रहेका जम्मै मानिसलाई परमप्रभुको रीसको दाखरस पिउनु लगाँए।
21 अनि मैले एदोम, मोआब र अम्मोनिहरूका सबै राजाहरू पनि गाभिन्छन्, सबैलाई परमप्रभुको रीसको दाखरस पिउनु लगाँए।
22 मैले सोर र सीदोनका सबै राजाहरू र जम्मै मानिसलाई परमप्रभुको रीसको दाखरस पिउनु लगाँए।
अनि समुद्रका टापुहरूका राजाहरूलाई यो पिउन लगाँए। 23 ददान, तेमा र बूजका अनि कनपट सम्म केश काट्ने मानिसहरूलाई मैले यो पिउन बाध्य गराँए। 24 मैले अरब देशका र सीमान्तका सारा राजाहरू जो मरुभूमिमा बस्छन्, 25 जिम्री, एलाम र मादैका सारा राजाहरूलाई पनि यो पिउन लगाँए। 26 मैले सारा उत्तरका राजाहरू नजिक र टाढामा भएका राज्यहरूलाई यो पिउनु लगाँए। मैले सबै पृथ्वीका राजाहरूलाई परमप्रभुको क्रोधको कचौराबाट दाखरस पिउन लगाँए। तर “शीशकका”[a] राजाले पनि अन्य जातिहरूले पिए पश्चात पिउनेछन्।
28 “ती मानिसहरूले तिम्रो हातबाट कचौरा लिन अस्वीकार गर्छन। तिनीहरूले यसलाई पिउन अस्वीकार गर्छन। तर तिमीले तिनीहरूलाई भन्नेछौ, ‘सेनाहरूका परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुहुन्छ तिमीहरूले अवश्य नै यो कचौराबाट पिउनेछौ। 29 मैले यरूशलेममाथि जसलाई मेरो नाउँले कहलाइन्छ अनि सायद तिमीहरूले दण्ड पाउँदैनौ भनेर सोचिरहेका होलाऊ, विपत्ति ल्याउन थालिसकेकोछु। म पृथ्वीमा भएका सारा मानिसहरू प्रति आक्रमण गर्न तरवारलाई बोलाउनेछु।’” यो सेनाहरूका परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो।
30 “यर्मिया! तिनीहरूलाई भन्छन्:
‘परमप्रभु उँभोबाट गर्जनु हुन्छ।
उहाँ आफ्नो पवित्र मन्दिरबाट गर्जनु हुन्छ।
परमप्रभु उहाँको भूमिका मानिसहरूलाई जोरसित गर्जनु हुन्छ।
उहाँ दाखरस बनाउनेले अङ्गुर किच्याउँदा गरेको आवाज झैं चिच्चयाउनु हुन्छ।
ती चिच्चयाहटहरू पृथ्वीका सबै बासिन्दाहरू सम्म पुग्छ।
31 त्यो हल्लाको प्रतिध्वनि,
पृथ्वीको आखिर सम्म पुग्छ।
पृथ्वीका मानिसहरूका विरूद्धमा
परमप्रभुको एउटा अभियोग छ।
उहाँले मानिसहरूलाई न्याय
र दुष्टहरूलाई तरवारले मार्नु हुनेछ।’”
32 यसकारण सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“हेर, महा-सर्वनाश एक देशदेखि अर्को देशमा फैलिनेछ।
पृथ्वीको सुदूर कुनाहरूबाट
एक सर्वनाशक आँधी आइरहेछ।”
34 हे गोठालाहरू हेर, विलाप गर! हे बथानका नायकहरू हो,
खरानीमा लडीबडी गर।
किनभने तिमीहरूका हत्या हुने र चिच्चाउने,
अनि तितर-बितर हुने समय आएको छ।
तिमीहरू झर्नेछौ र दामी जग झैं फुट्नेछौ।
35 गोठालाहरूले आफै लुक्ने ठाँउ पाउने छैनन्।
बथानका मालिकहरूले भाग्न सक्तैनन्।
36 म गोठालाहरूका हाऊ-हाऊ शब्दहरू
र बथानका मलिकहरूका चित्कार सुन्छु।
परमप्रभुले तिनीहरूको खर्क नै नष्ट पार्नु भयो।
37 शान्तमय खर्कहरू नष्ट गरिए।
परमप्रभुको भीषण क्रोधले यस्तो गरेको हो।
38 परमप्रभु हिंस्रक सिंह ओडारबाट निस्केको जस्तै हुनुहुन्छ।
परमप्रभुको बल्दै गरेको रीस र अत्याचारीहरूको रीसले,
तिनीहरूको देश उजाड निर्जन बनिएकोछ।
25:26 “शीशकका” बाबेलको गुप्ती नाउँ।